Caqli-yaqaanka Islamabad Khabiir ku Saabsan Dejinta Google Analytics si loo soo saaro Dib-u-diraha Ghost
Spam ee Google Analytics ayaa noqotay arrin culus. Sababtoo ah tafaftirka xayeysiinta ah ee laga soo qaado bogagga qaangaarka ah iyo badhanka bulshada, webmasters waxay ka baqayaan dhammaan filtarrada ay sameeyeen si ay u maareeyaan xogta aan faa'iido lahayn ee goobahooda ay helaan. Ma jirto baahi loo qabo argagixin sababta oo ah samaynta Google Analytics si loo qariyo spam gudbinta waa mid sahlan. Laakiin marka hore, waa inaad fahamtaa sida spam u gudbinta u shaqeyso
Haddii aad rabto bini'aadam si aad u soo booqato goobtaada oo aad ka taxadartid tayada gaadiidkaaga, waa inaad fiiro gaar ah siisid farsamooyinka casriga SEO - ce logiciel pour.
Khabiir sare oo ka socda Semt , Sohail Sadiq, ayaa halkan ku siinaya xirfad ku habboon arrintan.
Waxaa suurtagal ah in qofna uusan ka takhalusin spam u gudbinta sida uu ku dhajiyo tirakoobkaaga wuxuuna waxyeeleeyaa darajadaada bogga ilaa xad. Taasi waa sababta aad uga saari lahayd xisaabta Google Analytics sida ugu dhakhsaha badan. Darodar.com, Priceg.com, iloveVitaly.com, hulfingtonpost.com, iyo blackhatworth.com waa kuwa ugu caansan ee keena niyadjab kuwa isticmaala Google Analytics
Haddii aad ku aragto xayndaab ku jirta gaadiidka warbixinta Google Analytics, jawaabtaada degdega ah waxay noqon kartaa mid farxad leh. Laakiin waa inaad ka walwashaa tayada gaadiidkaaga iyo heerka qiyaasta ee goobtaada. Fursadaha ayaa ah in spam gudbiyaha soo booqan doono boggaaga boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol iyo boqolkiiba wakhtiga lagu kharash gareynayo goobtaada waa xabbad labaad. Ka hor inta aadan wax kale ka qaadin, waa inaad isweydiiso "haddii gaadiidkan uu ku kalsoon yahay iyo haddii kale." Haddii kale, waa inaad qaadataa tallaabooyin si aad uga takhalustid spamka. Sidaa darteed, ogow meesha asalka u ah gaadiidkaaga. U tag Hawl Galka> Dhamaan Gaadiidka> Soo-gudbinta iyo hubi ilaha gaadiidka..Isku day inaad qiimeyso meesha booqashooyinka dhabta ah ka yimaadaan.
Dhibaatooyinka daran ee soo gudbinta waa in ay isticmaalaan sirdoonkaaga boggagaaga iyo kor u qaadista heerka sare u qaadista, taasoo saameyn ku yeelata mashiinkaaga search engine maalmo gudahood.
Haddii aad riixdo xiriirka HulfingtonPost.com ama xiriirka spam kale, waa inaad xirto boggaaga internetka sida ugu dhakhsaha badan. Markaas waxaad dib u furi kartaa oo tirtiri kartaa cookies iyo taariikhda si loo xaqiijiyo ammaankaaga. Waxaa muhiim ah in la ogaado in noocyada kala duwan ee spam lagu maareyn karo siyaabo kala duwan. Qaar ka mid ah ayaa lagaga dooday hoos.
Wuxuu ku wareegsan yahay shabakadda wuxuuna qaadanayaa macluumaad isaga u gaar ah. Waxay qabataa hawlo kala duwan adoo gujinaya xiriiriyeyaashaada oo kugu martiqaadaya in aad gujiso xidhiidhada laga shakiyo. Inta badan waxay ka timaadaa cinwaanada IP-ga kala duwan, oo ma xakameyn kartid taraafikada adoo ka reebaya IP-yada xisaabta Google Analytics. Si kastaba ha ahaatee, waxaad ku xiri kartaa faylashaada faylasha.
Soo gudbin aan laheyn wuxuu soo booqanayaa goobtaada. Tusaalooyinka ugu caansan waa darrada.com iyo ilovevitaly.com. Waxaa laga yaabaa inaad tixgelinayso faylka faylka faylka ah, laakiin maaha wax faa'iido ah oo aan micno lahayn sababtoo ah gudbinta gawaarida ayaa awood badan u leh inay wax ka qabtaan. Ma xiri kartid booqashadooda oo dhan, laakiin waxaad ku hayn kartaa koontada koontada Google Analytics. Waxay isku dayayaan in ay nacaan raad raacaan Google ayna isticmaalaan aqoonsiyo raadraac ah si ay u gutaan waajibaadkooda. Fursadaha ayaa ah in aqoonsigaaga lagu dabagalay oo lagu diiwaangeliyay spam gudbinta, iyo hadda booqashooyinka gudbinta ayaa muujinaya warbixinnada Google Analytics. Waa inaad isticmaasho shaashadda si aad uga hortagto spam iyo ku dar bogga shaki laga galo liistada ka-reebista.